ग्यास सिलिण्डर घर–घरको बम | नेपाल इटाली डट कम
ग्यास सिलिण्डर घर–घरको बम
November 7, 2009 — nepalitaly
काठमाडौं। दाउरा बालेर खाना पकाउने चलन विस्तारै घट्दै गएको छ। शहरीकरणसागै अधिकांश घरमा ग्याँस चुलो बल्न थालेको छ। तर, ग्यास सिलिण्डर कति खतरनाक हुन्छ भन्ने ज्ञानचाहिँ गृहिणीहरुमा कमै छ। बजारमा पुराना र पींध काटिएका सिलिण्डरहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। यसरी पींध काटिएको ठाउँमा ग्यास लिक भएर कुनै पनि बेला विष्फोट हुन सक्ने यस्तै सिलिण्डरहरुको अधिकतम प्रयोग पनि भइरहेको छ।
ग्यास कम्पनीहरुको लापरबाहीकै कारण यति घातक सिलिण्डर भान्सामा पुगेको छ। नयाँ सिलिण्डर प्रयोग हुन थालेको १० वर्षपछि सिलिण्डरको हाइड्रोलिक टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम ग्याँस कम्पनीहरुले गर्नुपर्ने हो। तर, आयल निगमको यो नियम कार्यान्वयनमा ग्याास कम्पनीहरुले उदासीनता देखाइरहेका छन्। नियम लागू गराउन सरकारी अधिकारीहरुले पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ भन्छन्– ‘सरकारको लापर्बाहीका कारण उपझोक्ताको ज्यानसमेत जोखिममा परेको छ।’
यता, ग्यास कम्पनीहरुको यही लापर्बाहीकै कारण भान्सामा राखिएको ग्यास सिलिण्डर कुनै पनि बेला विष्फोट हुने खतरा छ। जानकारहरुले त घर–घरमा राखिएका ग्यास सिलिण्डरलाई शक्तिशाली बमकै संज्ञा दिएका छन्। भारतको दिल्लीमा हाइड्रोलिक टेस्टबारे जानकारी लिएर फर्केका किशोर केसीले भने अब पनि सिलिण्डरहरु परीक्षण नगरी प्रयोग गरिने हो भने यो घर–घरमा बम बनेर निस्कने खतरा छ।
सिलिण्डरहरु जथाभावी गुडाउँदा, फ्याँक्दा पातलिएर पड्किने खतरा हुन्छ। ग्यास जस्तो संवेदनशील पदार्थ यसरी गुडाउन र फाल्न त नहुने हो तर भइरहेको छ यही। गोदाममा मात्र होइन, ग्यास बिक्रेता र कम्पनीमा समेत थुप्रै सिलिण्डर राखिएको हुन्छ, जहाँ सिलिण्डर गुडाउने र फ्यााक्ने गरिन्छ।
ग्यास सिलिण्डर दयनीय अवस्थामा छन्, तिनले अनाहकमा धेरै मानिसको ज्यान लिन सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ग्यास कम्पनीका सञ्चालकहरु र नेपाल आयल निगम कानमा तेल हालेर बसेको छ। एलपी ग्यास उद्योग संघका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित सिाह भन्छन्– केही समयअघि फुटरिङ काटिएका यस्ता सिलिण्डरहरु प्रशस्त बजारमा देखिन्थ्यो तर अहिले यस्ता सिलिण्डरहरु छैनन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका २७ वटै ग्यास कम्पनीका सञ्चालकले यस्तै सोचेर त होला नि घातक ग्यास सिलिण्डर बेचेर लाखााै कुम्ल्याइरहेको।
जहाा अन्याय–अत्याचार हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। त्यसैले त ग्यास कम्पनीका सञ्चालकले गरिरहेको अन्यायविरुद्ध ग्यासबिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल आक्रोशित छन्। ग्यास कम्पनीका सञ्चालकको गैरजिम्मेवारपनकै कारण ठूलै दुर्घटना हुन सक्ने चेनावनी उनले दिएका छन्। सिलिण्डरहरु पड्काडा हुने क्षति हामीले सोचेभन्दा निकै बढी हुन्छ। भारतमा भएको एउटा घटनापछि उसले ग्यासमा निकै कडाइ गरेको छ तर नेपालमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन उनले भने। उनले त्यसै यति हृदयस्पर्शी कुरा गरेका होइनन्। विगतमा भएका केही घटनाले नै यिनको कुरालाई पुष्टि गरिदिन्छ।
काठमाडौंमा पटक–पटक ग्यास सिलिण्डर पट्केका र लिकेज भएर मानिसको ज्यानै गएको घटना सुनिन्छ। गत सोमबार वसन्तपुर नजिकै रहेको मम पसलमा ग्यास लिकेज भएर आगोलागि हुदा २५ जनाको झण्डै ज्यान गएको थियो तर उनीहरुले हाम फालेर ज्यान जोगाउन भने सफल भएका थिए। उक्त घटनामा पनि १२ जना भने घाइते भएका थिए। सिलिण्डर पड्केकै कारण काठमाडौ धर्मस्थलीका एकै घरका दुईजनाको ज्यान गएको थियो। गत असार ६ गते विकेश र विमला महर्जनको अनाहकमा ज्यान गएको थियो। ग्यास बिक्रेता महासंघले मृतकका परिवारलाई साढे चार लाख रुपैयाा क्षतिपूर्ति दिएर घटनालाई थामथुप पार्योय। गत साता नयाा बानेश्वरमा पनि यस्तै घटना भयो। शशी उप्रेतीको ज्यान गयो। ठहिटीमा मुस्किलले एक घर जल्नबाट जोगियो। यी त पछिल्ला प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, यसअघि पनि यस्ता धेरै वटा घटना भएका छन् अनि यस्तै घटना दोहोरिने खतरा झन् बढिरहेका छन्।
ग्यास कम्पनीका मालिकहरुले सर्वसाधारणको ज्यान जाँदासमेत कुनै चिन्ता लिएका छैनन्, कमाउधन्दामै मस्त छन्, उनीहरु। तर, जनताको जीऊधनको रक्षा गर्छु भनेर कहिल्यै नथाक्ने सरकार पनि यो मामिलामा चुपचाप देखिन्छ। ग्यास सिलिण्डर पड्केर सर्वसाधारणको ज्यान गएको कुरासमेत थाहा पाउादो रहेनछ, ग्याास बिक्री–वितरणको स्वीकृति दिने नेपाल आयल निगम। निगमका कार्यकारी–निर्देशक दिगम्बर झा भन्छन्– अब हामी ग्यास सिलिण्डरहरुको कडाइका साथ अनुगमन गर्छौंै र खतनाक सिलिण्डरहरु भेटिएकै ठाउमा नष्ट गर्ने योजना छ। तर, ग्यास कम्पनीका मालिकहरु आयल निगमकै कारण ग्यासमा भद्रगोल भएको दाबी गर्छन्। ग्यास उद्योग संघका केन्द्रीय सदस्य सिंह भन्छन्– सरकारले कति ग्यास कम्पनी चाहिने हो भनेर तोकेको छैन भने अनुगमन संयन्त्र नबनाएर लामो समयसम्म निगमकै कारण ग्यासमा भद्रगोल भएको हो। ग्यास कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दिने निकायले नै सिलिण्डरको अनुगमनमा चासो देखाएको छैन अनि अब कस्ाले हटाउला पुराना र विष्फोटको खतरामा रहेका ग्यास सिलिण्डर?
फुटरिङ काटिएका र पुराना सिलिण्डर खतरा मात्र छैनन्। यस्ता सिलिण्डरभित्र फोहोर टाँसिन्छ, ग्यास ठोस बनेर बस्छ, यही कारण यस्ता सिलिण्डरका लागि पैसा पूरै तिरे पनि ग्यास भने कम मात्र पाइन्छ। एक कम्पनीले अर्को कम्पनीको सिलिण्डरको पींध काटेर प्रयोग गर्ने, नियमित हाइड्रोलिक परीक्षण नगर्ने, जथाभावी रुपमा राख्ने र गुडाउने गर्दा सिलिण्डरहरुको आयु त घटेको छ नै, यस्ता सिलिण्डरमा हुनुपर्ने जति ग्याससमेत हुँदैन। तर, उपभोक्ताले यो कुराको पत्तै पाएका छैनन्।
उपझोता सुदीप कार्की भन्छन्– मलाई त अहिलेसम्म यसबारे जानकारी नै छैन। आयल निगमले नै यस्ता कुरामा मौन समर्थन गरेर ग्यास कम्पनीहरुलाई मनपरी गर्ने छुट दिइरहेको बेला उपभोक्ताले जानकारी पाउन पनि कसरी? थाहा पाएर पनि गर्नु पो के छ र? त्यसैले जे जति ठगिए पनि चुप छन्, विचरा उपभोक्ता। ग्यास बिक्रेता संघका अध्यक्ष अर्याल भन्छन्– उपझोक्तालाई जानकारी नै नभएको विषयमा कसरी बोल्न सक्छन्।
जताततैबाट उपभोक्ता ठगिंदा रहेछन्। आम उपभोक्ताले ११ सय २५ रुपैयाामा खरिद गरिरहेको ग्यास सिलिण्डर ठूला होटललाई भने सस्तोमा दिइादो रहेछ। दुई सय रुपैयाा सस्तो। हो, ठूला–ठूला होटलले प्रतिसिलिण्डर ९ सय ५७ रुपैयाा मात्र तिरे पुग्छ। ठूला होटलहरुले राजश्व तिर्दा ग्यासमा तिरेको राजश्व फिर्ता लिन्छन् जसले गर्दा होटललाई ९ सय ५७ र सर्वसाधरणलाई ११ सय २५ परेको छ ग्यास विक्रेता संघका अध्यक्ष अर्यालले भने– भ्याट फ्री आइटम गरे यो विषय टुङ्गिन सक्छ। यो ग्यास बिक्रेताले नै दिएको जानकारी हो। अनि नेपालमा आधा भन्दा बढी ग्यास ठूला होटलमै खपत हुन्छ। अहिले नेपालमा मासिक १२ हजार मेटि्रक टन ग्यास खपत भइरहेको छ भने यो परिमाणको ग्यासका लागि ८ लाख सिलिण्डरहरु प्रयोग भइरहेको छ। गरिब उपभोक्तालाई महागो र ठूला होटललाई सस्तोमा ग्यास सिलिण्डर दिने कुरा न्यायोचित छैन। यद्यपि ठूला होटल र सर्वसाधारणलाई एउटै मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास भने नभएको होइन। ग्यासलाई भ्याट फ्री बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ। २०२८ सालमा नेपालमा ग्यास भित्रिएको रहेछ। २०४६ सालपछि मात्र उपभोक्ताले यसको बढी प्रयोग गर्न थालेका रहेछन्। तर, ग्यास सिलिण्डरहरुको अहिलेसम्म एकपटक पनि हाइड्रोलिक टेस्ट भएको छैन जब कि दुईपटक टेस्ट भइसक्नुपर्थ्यो। तर यस्तो परीक्षण गर्ने तरिकाकै टुंगो लागेको छैन रे।
देशमा ग्यासको उपयोग बढिरहेको छ। अब पनि पुराना सिलिण्डरको परीक्षण नगर्ने हो भने खतरा झनै बढ्ने छ। अनाहकमा धेरै जनाले ज्यान गुमाउनुपर्नेछ। तसर्थ यस्ता थोत्रा सिलिण्डरको हाइड्रोलिक टेस्ट गरी थप दुर्घटना हुन नदिन बेलैमा सचेत हुनुपर्दछ अनि थोत्रा, फुटरिङ काटिएका सिलिण्डरमा कम ग्यास भरिएर उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न पनि ढिलो भइसकेको छ। तत्काल यो कार्य सम्भव नभए घातक सिलिण्डरबाट हुने क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसका लागि बेलैमा जनताको आवाज नसुन्ने राज्य र कमाइमा मात्र ध्यान दिने ग्यास व्यापारीहरुलाई उपभोक्ताको प्रचुर दबाब चाहिन्छ।
« दार्जलिङमा थप आर्थिक नाकाबन्दी
दुधकोशीको कथा »